Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka ee Columbus, Dublin, iyo Westerville, OH, waxaan ku siineynaa daryeel qoto dheer, shakhsi ahaaneed bukaankeena oo dhan ilaa heer kasta oo nolosha ah. Xilliga uurka, waxaad filan kartaa in laguula socdo xitaa si ka dhow sidii caadiga ahayd maadaama aan si taxaddar leh ula soconno caafimaadka adiga iyo ilmahaaga koraya. Intii aan ku jirnay imtixaanno dhammaystiran, daraasado sare oo sawir qaadis ah, iyo inbadan, waxaa muhiim ah in aad nagala hadasho wixii welwel ama taariikh gaar ah ee aad qabtid si aan u qaabeyno daryeelkaaga si aan ula kulanno baahidaada shaqsi.
Muxuu sameeyaa OB / GYN?
OB / GYN waa dhakhtar ku takhasusay takhasuska dhalmada iyo dumarka, taasoo la micno ah inuu isagu ama iyadu u fidiso adeegyo daryeel caafimaad haweenka muddada uurka iyo sidoo kale guud daryeelka dumarka. Kuwaas waxaa ka mid noqon kara:
Daryeelka dhalmada inta lagu guda jiro uurka
Imtixaanka miskaha / PAP smear
Qorsheynta qoyska / xakameynta dhalmada
Caadada /daryeelka menopause
Qalitaanka jirka ee Robotic
Maxaan u sheegaa OB / GYN balankeyga koowaad?
Haddii aad uur leedahay ama aad si fudud jadwal ugu sameysid booqashadaada haweeneyda ugu horreysa ee wanaagsan OB / GYN cusub, waxaa jira dhowr waxyaalood oo ay muhiim tahay in laga wada hadlo inta lagu jiro ballantaada si loo hubiyo inaad hesho daryeelka ugu dhameystiran, shakhsi ahaaneed, iyo habboon. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Taariikhda caafimaadka: Dhaqtarkaaga wuxuu kuqaadan doonaa taariikh caafimaad oo dhameystiran qoraal laakiin sidoo kale wuxuu rabaa inuu kala hadlo wixii quseeya ee caafimaadkaaga hada iyo kan hore, sida:
Shuruudo kasta oo salka ku haya
Dhibaatooyinka xilliga uurka
Taariikhda baaritaanka PAP aan caadi ahayn
Natiijooyinka raajada naasaha ee hore
Taariikhda qoyska: Waxa kale oo aad muhiim u ah in laga wada hadlo taariikh qoys kasta oo dhibaato caafimaad leh, gaar ahaan haddii aad leedahay qaraabo dumar ah oo qaba / ku dhacay kansarka naasaha, kansarka makaanka, kansarka ugxan sidaha, ama xaalad kale oo habdhiska dumarka.
Daawooyinka: Dhakhtarkaagu wuxuu ubaahan doonaa inuu ogaado liistadaada daawada ee hada jira si loo hubiyo in daawooyinka cusub ee la qoro aysan laheyn is dhexgal daroogo. Haddii aad uur leedahay, dhakhtarkaagu wuxuu dib u eegi doonaa liiskaaga daawooyinka hadda si loo hubiyo inay ammaan yihiin oo ku habboon yihiin muddada uurka.
Walaacyada shaqsiyeed: Sababtoo ah haweeney kastaaba waa mid gaar ah, waxaan daryeeleynaa bukaan kasta shaqsi ahaan, waxaan qaadaneynaa waqti kufilan oo aan ku dhageysano welwelka gaarka ah, qorshayaasheeda, yoolalka, iyo inbadan. Ha ka waaban inaad wax su'aalo ah weydiiso ama aad la wadaagto wixii walaac ah ee aad qabtid. Mawduucyada guud ee aan kala hadalno haweenka, haddii ay tahay ballanta ugu horreysa ama ay bukaanno ahaayeen sannado badan, waxaa ka mid ah:
Cadaadiska iyo walwalka
Adiga oo haysta sawir buuxa oo caafimaadkaaga ah, oo ay kujiraan wixii walaac ah iyo taariikh shaqsiyeed ama qoys oo xusid mudan oo aad yeelan karto, kooxdayada abaalmarinta kuheshay ee OB / GYNs ee Columbus, Westerville, iyo Dublin, OH ayaa ku siin kara daryeel dhameystiran, shaqsiyeed mudan.
Ka hel OB / GYN aad jeceshahay Bartamaha Ohio
Dumar badan, OB / GYN-kooda waa barta ugu horeysa ee lagala xiriiro baahidooda daryeel caafimaad waxayna inta badan arkaan iyaga sanado badan, ama xitaa tobanaan sano, noloshooda. Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka, waxaan ku faraxsanahay inaan bixinno daryeel shaqsiyeed iyo daaweyn heer sare ah iyo hanaanno kugu ilaalinaya caafimaadkaaga inta lagu guda jiro qaangaarnimada hore, uurka, dayska, iyo sannadaha u dhexeeya oo dhan. Call mid ka mid ah goobaheena ku habboon ee Westerville, Dublin, ama Columbus, OH si aad u ballamiso ballantaada ugu horreysa maanta!
Goobta Columbus Goobta Dublin Goobta Westerville Daryeelka Dumarka Fiican Mammografi Daryeelka menopause Tijaabinta Urodynamic Qalitaanka Qalitaanka Robotka Cabashooyinka Guud Guudmarka Uurka Nafaqada & Jimicsiga